कसैले मलाई बुझाईदेओस्| Janachaso Khabar
कसैले मलाई बुझाईदेओस्, के मेरो लैंङ्गिक अवस्था नै मेरो जिन्दगीका महत्वकांक्षाहरू, मेरो सीप, मेरो उद्देश्य र स्वयं मेरो परिचायक हो? म मान्छे हुँ र आफ्नै चाहनाको पेशामा आवद्ध भएर अघि बढ्न चाहन्छु। हाम्रो समुदाय र समाज, अझ भनूँ सिंगो देशले भोगिरहेका जटिल सामाजिक चुनौतीहरूलाई दिगो समाधान दिनसक्ने कार्यक्षत्रमा आवद्ध भएर अर्थपूर्ण पेशागत जीवन बाँच्न सकूँ भन्ने हेतुले मैले सामाजिक रुपान्तरण र व्यवहारिक रुपमा विकाससम्वद्ध क्षेत्रमा काम गर्ने निधो गरेर निरन्तर लागेकी हुँ।
यो बहुआयामिक क्षेत्रले सारभूत समानता, सारपूर्ण कामका साथसाथै व्यक्तिगत र पेसागत विकासको अवसर तथा सामाजिक रुपान्तरणले प्राथमिकता पनि देला भनेर म यस क्षेत्रप्रति आकर्षित भएकी हुँ। अफसोस, काम गर्दै जाँदा सबै पक्ष सुखद नहुने रहेछन्।
विभिन्न कार्यक्रम तथा भेटघाटमा जब म आफूलाई चिनाउँछु, मानिसहरूको केही प्रश्न तथा प्रतिक्रिया शैलीले मेरो मथिंगल खलबल्याइदिन्छ, विसुद्ध गृहिणी भएर बस्नु पर्ने तिमिजस्तो मानछे, बिकासे, सामाजिक रुपान्तरणको अभियान, कार्यक्रममा सहभागी भएर किन हिड्छ्यौ ? लिंगकै कारण नै म छोरी हुँ र ब्राम्हण थरकी छोरी मैले सामाजिक रुपान्तरणमा लाग्नु जरुरी होइन भन्ने मानसिकताले उनीहरूमा घर गरेको बुझ्न गाह्रो हुन्न।
सामाजिक अभियानैकै क्रममा जीवनमा मैले पटक पटक अत्यन्त जातिवादी, लिंगभेदी र स्त्रीद्वेषी प्रश्न र प्रतिक्रियाको सामना गर्दै आइरहेकी छु । मानौं यो क्षेत्रमा आवद्व भएर मैले ठूलै पाप गरिरहेकी छु । जबकि यिनै क्षेत्रमा मलाई सवाल गर्नेहरू नै आफूलाई लैंगिक, जातीय समानता, समावेशिता, मानवअधिकार, महिला सशक्तिकरण तथा उनीहरूको आर्थिक स्वतन्त्रता लगायतको सबैभन्दा ठूलो हिमायती र अभियान्ता ठान्ने गर्छन्।
अझ स्तब्ध त म त्यतिखेर हुन्छु, जब ‘रामराज्य निर्माण गर्ने अभियान’ मा लागेका यस्ता अगुवाहरू नै तँ जस्तो मान्छे यस्ता काममा लाग्नु नहुने महान सुझावहरू सित्तैंमा बाँडिरहेका हुन्छन् । नेपाली नगारिकको हैसियतले मैले संविधान प्रदत्त सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्दै स्वतन्त्र महिलाका रुपमा काम गरेर जीवन जिउन खोज्दा उनीहरूको मन, टाउको किन दुख्छ? सामाजिक रुपमा काम गरे यता मैले यस्ता कयौं तीता अनुभवहरू गरिसकेकी छु।
विगतदेखि विभिन्न अध्ययन र अनुभवबाट जीवनमा हासिल गरेको ज्ञान र क्षमतालाई चटक्कै बिर्सेर, गरिआएको अभियानलाई तिलाञ्जली दिएर दिनहुँजसो विभिन्न (किट्टी) पार्टीमा रमाउने कयौं कथित उच्च ठान्ने मानिसहरू पनि मैले देखेकी छु । चाहेमा म पनि त्यसो गर्न सक्छु तर गर्दिनँ । मेरो रुचि त्यो होइन । दिनरात नभनी अथक मिहिनेत र महिला अधिकार प्राप्ती र संवैधानिक रुपमा प्राप्त स्वतन्त्रताका लागि हो, जसले हरेकको जीवनमा धेरै ठूलो अर्थ राख्छ । झिनामसिना खर्चका लागि पनि हात फैलाउनु नपरोस महिलाहरूले भन्ने पनि हो।
समाजमा पुरुषहरूले आफ्नो जीवनमा जेजति उपलब्धी हाँसिल गर्न सक्छन्, महिलाहरू पनि त्यसका लागि उत्तिकै समर्थ छन् । तर विडम्वना, संकीर्ण सामाजिक संरचनालो त्यसो गर्ने अनुमति दिँदैन । हरेक आवश्यकता पुरुषले पूरा गरिदिने हुनाले महिलाले काम गर्नु जरुरी छैन भन्ने रुढिग्रस्त मनोदशाबाट हाम्रो समाज अझै माथि उठ्न सकेको छैन।
तर, विवाहपछि मैले आफ्ना लागि आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बन्न कोशिस गरिरहेँ । म काम गर्छु, किनकि मलाई त्यसमै आनन्द लाग्छ । मेरो परिवारले मलाई र मैले मेरो परिवार गर्ने माया मेरो लागि सर्वोपरी हो । यो मामिलामा म आफूलाई भाग्यशाली ठान्छु । बिनाकाम दिन काटेर बस्नु मेरा लागि सबैभन्दा कठीन काम हो । दिक्कलाग्दो दिनचर्या भन्दा व्यस्त दैनिकीले दिन थकान मेरा लागि प्रिय छ । व्यक्तिगत बिमाको किस्तादेखि आफूले लगाउने जुत्तासम्मका सम्पूर्ण खर्च आफ्नै कमाइले गर्नसक्नु पर्छ र सक्छु । म कसैका लागि आर्थिक बोझ बन्न चाहन्नँ भन्ने लाग्छ मलाई।
जब जब म आफ्नै खर्चले आफ्ना छोराछोरीहरूका लागि आवश्यक सामाग्री, परिवारका सदस्यहरूलाई उपहारहरू किन्छु, सहअस्तित्वको बोधले मलाई व्यापक सन्तुष्टि दिन्छ। म काम गर्छु ताकि मैले आफ्ना व्यक्तिगत प्रयोजनका वस्तुहरू किनमेलमा निस्कनु अघि हजार पटक खर्चबारे सोच्नु नपरोस् । म यसकारण पनि काम गर्छु ताकि हामी दुई पति पत्नी बीच विवाद हुँदा बारम्बार मलाई घरको आर्थिक भार बहन गरेकै कारण परिवारमा उनी सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन् भन्ने कुरा याद दिलाइरहनु नपरोस् । म काम गर्छु किनकि म, माफ्नो परिवारको भविष्य र सामाजिक रुपान्तरणमा मैले केही हदसम्म योगदान दिन चाहन्छु । आजको कुबेर भोलि कंगाल नबन्ला भन्ने कसलाई के थाहा ? कामले मलाई स्वतन्त्रता, आत्मविश्वास, बाहिरी दुनियाँसँग अन्तरक्रिया गर्ने अवसर र खुशी दिन्छ भने म किन नगरुँ ? जसले मेरो व्यक्तिगतसँगै सामाजिक रुपान्तरणमा थोरै भएपनि सकारात्मक सहयोग पु¥याओस्।
हाम्रो समाजमा काम गरेवापत पाइने पारिश्रमीक, ज्याला वा भनूँ तलव र कामबाट प्राप्त हुने आत्मसन्तुष्टि बीचको अन्तरसम्बन्धको बुझाई असाध्यै कमजोर छ । त्यसैले हामी आपसी सम्बन्ध, रुचीको क्षेत्रमा काम गर्ने क्षमता तथा नेतृत्वका अवसरजस्ता गैरमौद्रिक स्रोतहरूबाट कामको सन्तुष्टि खोज्ने प्रयास गर्छौँ। पेशागत जीवनको गरिमालाई हामीले मिहिन रुपले विश्लेषण गर्न र बुझ्न धेरै बाँकी छ।
कामसँगै म खुशी बचत गर्छु किनकि त्यस्तै वातावरणमा हुर्किएँ । घरपरिवार सम्हाल्नु मेरा लागि ठूलो काम थियो र यसमा म दिनरात खट्न सकें । घरको सरसफाई, भातभान्सा, तरकारी गोडमेल, बगैंचा गोडमेल लगायतका यावत् काम निरन्तर गर्दै आइरहेकी छु । भान्साको काम कवेल दुई घण्टा बिताउनु मेरो दैनिकी हो । र, अर्को सत्य यो पनि हो कि यी सारा जिम्मेवारी बाहेक म सामाजिक कार्यमा निरन्तर खटिरहने इच्छा राख्ने मान्छे पनि हुँ।
साथीभाइ, आफन्त र अझ नजिकबाट चिन्नले नै सामाजिक काम मेरा लागि रहर वा समयकटनीको मेलो मात्र भएको ठान्दै आइरहेका छन् । त्यसैले पनि म जीवनमा अझ गम्भीर रहँदै आएकी छु ताकि काम मेरा लागि समय बिताउने उपाय होइन, दायित्व, निष्ठा, प्रष्तिठा र भविष्य हो भनी उनीहरूलाई बुझाउन सकूँ।
मैले आफ्नो कामलाई केवल निजी कामकको रुपमा लिएकी छैन । यो मेरा लागि आत्मसन्तुष्टि र क्षमताको उच्चतम उपयोगको एउटा कडी हो । म काम गर्छु किनकि मसँग यसका लागि चाहिने सीप, क्षमता र प्रतिभा छ । म काम गर्छु किनकि यसो नगर्दा मैले आफ्नो सीप र क्षमताको उपयोग गर्नबाट आफैंलाई वञ्चित गराइरहेकी छु भन्ठान्छु । म आफ्नो ज्ञान, सीप, बौद्विकता र क्षमतालाई कुनै पनि हालतमा खेर जान दिन्नँ, त्यसैले काम गर्छु।
ब्राम्हण परिवारमा त्यसमा पनि छोरी हुनुमा मेरो दोष छैन। दोष र खोट त तिनीहरूको सोचमा छ जो बिबाहित छोरीलाई उसको पतिको थर र पपरचयको घेराभित्र राखेर परिभाषित गर्न रुचाउँछन् र ऊभित्रका तमाम महत्वाकांक्षालाई पानीका फोका सरह मान्ने संकीर्ण मानसिकताबाट ग्रस्त छन्।
जनचासो खबर| मंसिर ८, २०७८ बुधबार